Blog of Nyein Chan Yar: Good news
Posted by dathana at Wednesday, September 24, 2008
Anonymous September 30, 2008 12:17 PM
ဗျို့ .. ကိုကြီးဒဿန .. မေ့လောက်ပြီရှိမှပဲ ပြန်ပြန်ပေါ်လာတော့တယ် ။ အင်း .. အားသလို စိတ်ပါသလိုသာရေးပါဗျာ ။ ကျနော်တို့ လည်း အားသလိုသာ လာဖတ်တာပေါ့ ။
အဲ့ဒီ အကို့ မေးလ်ထဲရောက်လာတာ ဟစ်ဟော့ သီချင်း မဟုတ်ဘူးဗျ ။ ကောင်းကင်ကို ဆိုတဲ့ ဘလော်ဂါတစ်ယောက်ရေးတဲ့ ကဗျာ ဆိုပါတော့ဗျာ ။ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ကာရံတွေက ဟစ်ဟော့ ဆန်ဆန်ဆိုတော့လည်း ထင်မယ်ဆို ထင်လောက်စရာပေါ့ဗျာ .. :) သီချင်းလုပ်ဆိုမယ် ဆိုလည်း ရလောက်တာပေါ့ ။ အဲ .. အဲ ..ကျနော်ပြောတာ ကဗျာဆရာ ပြန်ကြားရင် အသည်းကွဲနေပါဦးမယ် ။ ဘလော့ဂ်လောက က နာမည်ကျော်ကဗျာဆရာတွေထဲက တစ်ယောက်ပဲဗျို့ ။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ သူ့ လိပ်စာတွေ့ ပါလိမ့်မယ် ။ တကယ်မိုက်တဲ့ ကဗျာတွေ ရှိတယ်ဗျ ။
အကိုလည်း တလ တခါလောက်တော့ ရေးဦးလေဗျာ ။ ဘာပဲ ရေးတင်တင်ပါ ။
အိုကေ ..ဘရားသားရေ .. keep on ..
Anonymous October 15, 2008 2:25 PM
If you can, Pleases!Send to me this KaungKiKo's Poem. I don't no how to copy it.Ok! Thankyou veryvery much !!!!
FreedomFighter88 October 15, 2008 5:32 PM
Anonymous October 19, 2008 4:33 PM